विचार | Naya Yougbodh National Daily | Page 366 Free songs
Home / विचार (page 366)
November 10, 2013	0 258 Views
November 10, 2013	0 241 Views
November 8, 2013	0 264 Views
हिलारी–हसिना सम्वाद र निर्वाचन
November 8, 2013	0 259 Views
मणि शर्मा आफ्ना छिमेकीमाथि भारतले अमेरिकी सहयोगमा कसरी आफ्नो खुनी नंग्रा बढाइरहेको छ त्यो नेपालीले मात्र होइन भारतको हरेक छिमेकीले भोगिरहेका छन् । भुटानको निर्वाचनमा सत्तारुढ दललाई हराउन ग्या“स र केरोसिन तेलमाथि दिंदै आएको अनुदान कट्टा गरेर निर्वाचनमा हराइदियो । नेपालमा नेकपा–माओवादीलगायत ...
स्कूल र कलेजहरु सप्रेकालाई कि सपार्नलाई ?
October 25, 2013	0 270 Views
जीतबहादुर शाह एकपटक मेरो एकजना मित्रस“ग उनको एकजना मित्र एवं संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलले पूmर्तिका साथ भनेछन्– ‘मेरो विद्यालयमा एकजना कक्षा ८ को विद्यार्थी कक्षामा रक्सीले मात्तिएर आएको रहेछ, मैले त रेष्टिकेट गरिदिए“ ।’ उनको रवाफ सुनेपछि मेरो मित्रले उनलाई भनेछन्– ‘त्यो ...
शिवराज गौतम– निरन्तर क्रान्तिको मशाल
October 25, 2013	0 321 Views
सुशील गौतम शिवराज गौतम बित्नुभयो । जन्मेपछि सबै मर्छन्, उहा“को पनि मृत्यु भयो । तर, शिवराज गौतम जसरी जिउनुभयो त्यसरी सबै मान्छेले जिउने साहस गर्न सक्दैनन् । हरेक मान्छे झै शिवराजजी पनि जन्मनुभयो त्यसैगरी हरेक मान्छेझैै सदा–सदाका लागि उहा“को जीवनको अन्त्य भयो । तर, हरेक ...
October 23, 2013	0 392 Views
नारायणप्रसाद पौडेल अरु देशमा नहुने कुरा हाम्रो देशमा हुन्छ, अनि अरु देशमा हुने कामकुरा चाहि“ हाम्रो देशमा हु“दैन । अरु देश र हाम्रो देशमा यही भिन्नता छ । अरु देशमा एकयुगमा एकपटक आउने संविधानसभाको निर्वाचन हाम्रो देशमा ६ वर्षमै दुईपटक आउ“छ । अरु ...
विचार बैंक प्रस्तावना
October 23, 2013	0 254 Views
विष्णु प्रभात दाहाल अधिकांश मान्छेहरु केही काम गर्ने योजना बन्यो कि को स“ग ऋण लिने होला ? कुन बैंकले कर्जा दिन्छ होला ? कुन चिज धितो राख्ने होला ? कसरी छिटो धन आर्जन हुन्छ होला ? यस्तै–यस्तै सोच्न थाल्छन् । यो द्रव्यमुखी दृष्टिकोणले भन्छ जे ...
चुनावी आकलन गाथा
October 22, 2013	0 245 Views
युग पाठक मुलुक चुनावी रौनकमा प्रवेश गरेको छ । उमेदवारहरु जोडतोडले प्रचारमा जुटेका छन्, सबै पार्टीका शीर्Èस्थ नेताको देश दौडाहा पनि चलिरहेकै छ । सर्वसाधारण्ँ मतदाता पनि मत खसाल्न उत्सुक छन् । चुनावी परम्पराअनुरुप प्रत्यÔतर्फ कुन पार्टीले कति सिट जित्ला भन्ने आ“कलन गर्नेहरुको ...
October 22, 2013	0 307 Views
युवराज शर्मा नेपालीहरु परिश्रमी हुन्छन् । त्यसैले होला अंग्रेजहरुले नेपालीहरुलाई ‘बहादुर’ भन्थे । उनीहरुको बुझाइमा नेपालीहरुमा साहस, हिम्मत र बहादुरीपन हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । त्यसकारण ब्रिटेनको वकिंघम दरवारमा पालो पहराका लागि गोर्खाली सेनाहरुले स्थान पाएका थिए । उनीहरुलाई बहादुर गोर्खाली भनिन्थ्यो । त्यसैले भारतबाट ...
Page 366 of 375« First...340350360«364365366367368»370...Last »